Tatitra fandalinana ny HACCP Sina & ISO9001 Fandaharam-pianarana-Enterprise News-NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD.
Tatitra fandalinana ny fandaharam-pianarana HACCP Sina & ISO9001
Fotoana: 2017-12-26 Hits: 120
Tatitra fandalinana ny fandaharam-pianarana HACCP Sina & ISO9001 Fotoana 23.12.2017 ka hatramin'ny 24.12.2017
LOHAHEVITRA FAMPIDIRANA NY HACCP & Fianarana ISO 9001
1. HACCP: Famakafakana ny loza sy ny teboka fanaraha-maso manakiana
Fomba fisorohana rafitra iray amin'ny fiarovana ny sakafo amin'ny loza voajanahary, simika ary ara-batana amin'ny fizotry ny famokarana izay mety hahatonga ny vokatra vita ho tsy azo antoka, ary mamolavola fandrefesana hampihenana ireo risika ireo amin'ny sehatra azo antoka.
2. Ny fari-pahaizana momba ny rafitra fitantanana kalitao ISO 9000 dia natao hanampiana ireo fikambanana hiantohana fa mahafeno ny filan'ny mpanjifa sy ny mpandray anjara hafa izy ireo rehefa mahafeno ny fepetra takian'ny lalàna sy ny lalàna mifandraika amin'ny vokatra iray.
1. Rohy amin'ny programa hafa
2. Torolàlana momba ny fampiharana ny rafitra HACCP
3. Fiofanana sy fanabeazana: ny mpiasa dia tsy maintsy mahatakatra ny atao hoe HACCP, mianatra ny fahaiza-manao ilaina hampandeha tsara azy io, ary tsy maintsy omena ireo fitaovana sy fitaovana ilaina hifehezana ireo CCP.
4. Fampiharana: Ny fampiharana ny fitsipiky ny HACCP dia ahitana ireto dingana 12 manaraka ireto, izay hita ao amin'ny filaharana lojika ho an'ny fampiharana ny HACCP.
5. Farito ny vokatra sy ny fizotrany
B. Fianakaviana ISO 9001 ao anatin'ny 4 Standard
1. ISO9000: 2015 Rafitra fitantanana kalitao-Teny ifotony sy voambolana.
2. ISO9001: rafitra fitantanana kalitao 2015-takiana.
3. ISO9004: 2009 Fitantanana mahomby amin'ny fikambanana.
4. ISO19011: Torolàlana momba ny fanaraha-maso ny rafitra fitantanana 2011.
Ny fanadihadiana HACCP dia natsangana araka ny fitsipika fito. Ireo fitsipika ireo dia ampiasaina hanoroana ny fizahana na ny fanaraha-maso. Ny tsy fanarahana ireo fitsipika ireo dia tsy hampanan-kery ny fandalinana HACCP ary hasiana fanamarihana mandritra ny fanaraha-maso.
Amin'ity taranja ity dia hianarantsika ny:
1. Ny fototry ny fanaraha-maso
2. Famaritana kalitao miorina amin'ny ISO 9001
3. Ahoana ny fomba handrafetana ny fanaraha-maso
4. Teknika fanontaniana momba ny fanaraha-maso
5. Fanatanterahana ny fivoriana fanokafana sy famaranana ny fanaraha-maso
6. Ahoana ny fanasokajiana ny fikarohana natao
7. Ahoana ny fomba hanaovana audit
Ny fitantanana ny QC ao amin'ny Nantong Chitsuru Foods Co., Ltd. dia mandray ny fiofanana mandritra ny faran'ny herinandro ho an'ny Krismasy HACCP & ISO 9001. Mandritra ny 2 andro fiofanana nataon'i Andriamatoa Wang, dia takatsika tsara kokoa ny rafitra fitantanana kalitao. Mandray anjara amin'ny fanatsarana ny fiarovana ny sakafo sy ny fifandraisana amin'ny risika izahay. Ary ny Mpiasa Chitsuru rehetra dia tsy maintsy manatrika matetika amin'ny fandalinana ny rafitra fitantanana kalitao.
Andraikitry ny mpamokatra ny fiarovana ny sakafo. Amin'ny tranga maro dia tsy maintsy manatanteraka an'io andraikitra io isika manoloana ny tombontsoan'ny mpiray antoka marobe, ny loharanom-pahalalana tsy ampy ary ny laharam-pahamehana mifaninana. Manantena izahay fa ity tatitra ity dia manome ny mpamokatra làlan'ny hetsika izay ahafahan'ny maso misahana ny asa mahomby sy mahomby amin'ny fanatanterahana ny iraka fiarovana ny sakafo ao anatin'ny tontolo miovaova haingana.
Taloha: Taom-baovao, vanim-potoana vaovao amin'ny 2018
Next: Ny mavesatra ho an'ny tenantsika, ny sakafo azo antoka kokoa ho an'ny mpanjifantsika